ညစ်ညမ်းဆိုက်တွေ Block တဲ့ (Netdog)ဆော့ဝဲလ် | အိမ့်မှူးသော်
ဒီကောင်လေးက ညစ်ညမ်းဆိုက်တွေကို ဘလော့တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မူရင်းပေးထားတာက Google search နဲ့ yahoo search အဲဒီနှစ်ခုမှာရှာတဲ့ ဆိုက်တွေကို ဘလော့တာဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝကိုဖွင့်လို့မရပါဘူး။ တော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်။ အိမ်မှာအင်တာနက် အသုံးပြုသူများ ကလေးများ လက်ကမျင်းမှာ စိုးတာဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုမယ့် သူငယ်ချင်းများကို မကြည့်စေရင်ဖြစ်ဖြစ် ပေါ့ ။ ကဲ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အသုံးပြုသူများအတွက် တစ်ခုထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ သူကပေးတာက google search engine နဲ့ yahoo search engine မှာပါ။ တခြား search engine ကိုထပ်ပေါင်းထည့်လို့ရပါတယ်။ bing.com ၊ ask.com ၊ babylon.com ၊ aol.com ၊ blekko.com အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ဟုတ်ပြီ ဘယ်လိုပေါင်းထည့်မလဲ လွယ်လွယ်လေးပါ။ အောက်ပုံလေးကိုကြည့်ပါ။
Add(A) နဲ့ Add(B) ဆိုတာကိုတွေ့တယ်ဟုတ်။ Add(A) ဆိုတဲ့ကောင်လေးက ဘလော့ချင်တဲ့ ဆိုက်လင့်ကိုထည့်ပါ။ Add(B) ကတော့ ဘလော့ချင်တဲ့ search engine ကိုထည့်ပါ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး ။ အောက်ဆုံးမှာ အဲဒီကောင်လေးအသုံးပြုဖို့ password ပါထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ အော်မေ့လို့ url ထည့်မယ်ဆိုရင် https:// အဲဒီကောင်လေးကို ထည့်ပေးဖို့ မလိုအပ်ပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ပါ (https://www.google.com) ။ ဒီလိုပါ(google.com) ။ ကဲဒီလောက်ဆိုရင် အသုံးပြုနည်းလည်းသိသွားပြီဟုတ်။ အသုံးလိုမည့်သူများအောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ။ install လုပ်ပြီးရင် serial key တောင်းပါတယ်။ key ပါ တခါတည်းရှာပြီး ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 1MB တောင်မရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါင်းလော့ချမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
လက်တွေ့တစ်ခုပြောပြမယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဒီပို့စ်ကို ရေးပြီးချိန်မှာ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို Porn(sex) ဆိုက်များBlockတဲ့(Netdog)ဆော့ဝဲလ် ဆိုပြီးတင်ပါတယ်။ ဒါပေ့မယ့် ပို့စ်တင်လို့မရခဲ့ပါဘူး ။ ဘလော့ကို reflash ပေးပြီး ပြန်တင်လည်းမရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်စက်မှာ netdog ဆော့ဝဲလ် ကို install လုပ်ထားလို့ပါပဲ။
series key is wrong.....
Here is my homepage ; porn addiction help
M SWAROVSKI 5:40 PM
link ka download swal loa ma ya tob woo ..... :'(
My web page; www.toplajme.com
May I simply say whatacomfort to uncover someone that actually understands what they're discussing on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More and more people have to look at this and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular given that you most certainly possess the gift.